Infectious Disease Kit Baarista
Kit Digstive Tract Baarista
Kit Habdhiska Neefsashada Baarista
Kit Hormone Baarista
Kit Caabuq Baarista
Kit Tumorigenesis Baarista
Analyzer difaaca Portable
waxyaabaha loo iibsado
Kit Baarista 25-hydroxy Vitamin D (fluorescen ...
Kit cudur-antigen in Helicobacter Pylori (...
Kit Baarista for unugyada in Helicobacter Pylori (F ...
Kit Baarista for Human chorionic Gonadotropin (fluo ...
Kit ogaanshaha Vitamin D 25-hydroxy (fluorescence dayo immunochromatographic) Waayo giisa isticmaalo ogaanshaha oo keliya Fadlan akhri xirmo this gelin si taxadar leh ka hor si ay u isticmaalaan oo si adag u raac tilmaamaha. Halaynta of natiijooyinka isku dayo ma ballan qaadi karto haddii ay jiraan wax leexashooyinkaasi ka tilmaamaha in warqadda la socota this. Loogu tala galay ISTICMAALKA Baarista Kit for Vitamin D 25-hydroxy (fluorescence dayo immunochromatographic) waa isku dayo immunochromatographic fluorescence for d tirada a ...
Kit ogaanshaha Vitamin D 25-hydroxy (fluorescence dayo immunochromatographic)
Waayo giisa isticmaalo ogaanshaha oo keliya
Fadlan akhri xirmo this gelin si taxadar leh ka hor si ay u isticmaalaan oo si adag u raac tilmaamaha. Halaynta of natiijooyinka isku dayo ma ballan qaadi karto haddii ay jiraan wax leexashooyinkaasi ka tilmaamaha in warqadda la socota this.
Loogu tala galay ISTICMAALKA
Baarista Kit 25-hydroxy Vitamin D (fluorescence dayo immunochromatographic) waa isku dayo immunochromatographic fluorescence for ogaanshaha tirada 25-hydroxy Vitamin D (25- (OH) VD) ee serum aadanaha ama plasma, kaas oo inta badan loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo a heerarka fitamiin D.It waa cudurka reagent.All muunad ah kaabayaal wanaagsan waa in la xaqiijiyay by hababka kale. Baaritaankaan waxaa loogu tala galay daryeelka caafimaadka loo isticmaalo xirfadle ah keliya.
Vitamin D waa fiitamiin iyo sidoo kale waa hormoon steroid, inta ay ku jiraan VD2 iyo VD3, kuwaas oo dhismeedyada waa mid aad la mid ah. Vitamin D3 iyo D2 yihiin diinta 25 hydroxyl vitamin D (oo ay ku jiraan 25-dihydroxyl vitamin D3 iyo D2). 25- (OH) VD ee jidhka bini'aadamka, dhismeedyada deggan, fiirsashada sare. 25- (OH) VD ka tarjumaysaa lacagta total of vitamin D, iyo awoodda diinta ka mid ah vitamin D ah, sidaas 25- (OH) VD waxaa loo arkaa inay tilmaanta wanaagsan ee qiimaynta heerka fitamiin D.The Baarista Kit ku salaysan yahay immunochromatography iyo natiijo ku siin karaan 15 daqiiqo gudahood.
xuub The qalab imtixaan la dahaarka leh kula conjugate ee BSA iyo 25- (OH) VD on gobolka imtixaanka iyo riyaha bakayle anti antibody IgG on gobolka ay gacanta ku. Suufka calaamadeysanayaan waxaa dahaarka by anti sumadda fluorescence 25- (OH) antibody VD iyo IgG bakayle ka hor. Marka jirrabaya muunad, VD 25- (OH) ee saamiga lagu biiriyo fluorescence calaamadeeyay anti 25- (OH) antibody VD, iyo foomka isku dar ah difaaca jirka. Under tallaabada ee immunochromatography ah, socodka oo adag in jihada of warqad nuugta, marka adag maray gobolka imtixaanka, The calaamadeysanayaan dhaadheer oo lacag la'aan ah lagu dari doonaa 25- (OH) VD on fiirsashada membrane.The ee 25- (OH) VD xiriir negative for signal fluorescence, iyo ka-fiirsashada ee 25- (OH) VD in saamiga lagu ogaan karaa by dayo immunoassay fluorescence.
Reagents IYO QALABKA bixisey
Qaybaha xirmo 25T :
card .Test shaqsi bireed pouched la 25T desiccant a
xal .A 25T
xal .B 1
.Package gelin 1
WAXYAABAHA LOO BAAHAN YAHAY LAAKIIN AAN BIXIN
Sample weel ururinta, saacad
URURINTA SAMPLE IYO Bakhaarka
1. saami noqon kartaa serum, heparin plasma daawada xinjirowga lidka ku ah ama EDTA plasma xinjirowga.
2.According in farsamooyinka caadiga ah qaado. Serum ama muunad plasma waxaa lagu hayn karaa qaboojiyaha at 2-8 ℃ for 7days iyo cryopreservation hoos ku -15 ° C muddo 6 bilood ah.
3.All muunad ka dheeraw wareegyada debcinta-dhalaalid.
Nidaamka imtixaanka of qalab ka eeg diiwaanka immunoanalyzer ah. Habka imtixaanka reagent waa sida soo socota
1.Lay gees u dhan reagents iyo saamiyo si heer kulka qolka.
2.Open Immune ku Analyzer la qaadan karo (WIZ-A101), geli login account password sida habka hawlgalka qalab ah, oo wuxuu soo geli interface ogaado.
3.Scan code dentification si loo xaqiijiyo wax imtixaanka.
4.Take kaarka baaritaanka ka bac-bireed ah.
5.Insert kaarka tijaabada galay booska kaarka ah, iskaan code QR ah, iyo loo ogaado wax imtixaanka.
6.Add 30μL serum ama muunad plasma in xal A, iyo sidoo kale isku daraan.
7.Add 50μL B xal in isku dar ah ee kor ku xusan, iyo sidoo kale isku daraan.
8 .Leave ey isku ilaa 15 daqiiqadood.
9.Add 80μL dar muunad iyo sidoo kale kaarka.
10.Click ah "baaritaanka caadiga ah" button, 10 daqiiqo ka dib, qalab si toos ah lagu ogaan doonaa kaarka tijaabada, waxaa ka akhrisan kartaa natiijada ka screen bandhigay qalab ah, iyo record / print natiijada imtixaanka.
11.Refer edbinta ee la qaadan karo Immune Analyzer (WIZ-A101).
QIIMAYN LA FILAYO
25- (OH) VD kala duwan sida caadiga ah: 30-100ng / mL
Waxaa lagu talinayaa in shaybaar kasta la dhiso ay kala duwan sida caadiga ah u gaar ah oo wakiil ka ah dadka bukaan.
Natiijooyinka baaritaanka iyo fasirkeediiba
.Waxaa kor xogta waa bareeg tixraaca ee ay dejiyeen xogta ogaanshaha xirmada this ah, oo waxaa la soo jeediyay in shaybaar kasta waa in la dhiso bareeg tixraaca ah muhiimadda la xiriira caafimaad ee bulshada ku nool gobolka this.
.Waxaa fiirsashada of VD 25- (OH) uu ka badan yahay kala duwan tixraaca, iyo isbeddellada jirkooda ama jawaab stress waa in la excluded.Indeed aan caadi ahayn, waa in la isu geeyo cudurka astaan caafimaad.
.Waxaa natiijada habkan yihiin oo kaliya lagu dabaqi karo in ay kala duwan tixraaca aasaasay by habkan, iyo natiijooyinka oo aan si toos ah u dhigma hababka kale.
Arrimaha .Sidoo kale ayaa sidoo kale waxay sababi karaan khaladaadka ku jira natiijada la ogaado, oo ay ku jiraan sababo farsamo, khaladaad hawl iyo arrimo kale oo muunad.
Bakhaarka iyo xasiloonida
.Oo kit waa 18 bilood shelf-nolosha laga bilaabo taariikhda soo saaridda. Ku kaydi ee xirmooyinka isticmaalin at 2-30 ° C. Ha barafeynin. Ha isticmaalin wixii ka dambeeya taariikhda uu dhacayo.
.Ha furo boorso ku shaabadeeyey ilaa aad diyaar u tahay in ay sameeyaan baaritaan yihiin, iyo imtixaanka hal isticmaal la soo jeediyay in la isticmaalo hoos deegaanka loo baahan yahay (heerkulka 2-35 ℃, qoyaan 40-90%) 60 daqiiqo gudahood sida ugu dhakhsaha badan suurto gal ah.
Diluent .Sample waxaa isla markiiba loo isticmaalaa ka dib markii la furay.
.Oo kit waa in la shaabadeeyey oo ka difaacan qoyaan.
.Dhammaan tijaabooyinka wanaagsan la ansixiyey waa hababka kale.
Tijaabooyinka .Dhammaan waa la daaweyn doonaa sida pollutant iman kara.
.Ha isticmaalin reagent dhacay.
.Ha isku waydaartaan reagents ka mid ah xirmooyin badan oo kala duwan jirin ..
.Ha isticmaalin kaarka baaritaanka iyo wixii accessories tuuro.
.Misoperation, muunad xad-dhaaf ah ama wax yar u horseedi kara in ay sababaan leexashooyinkaasi.
.Sida kasta oo isku dayo shaqaalaynta antibodies mouse, waxaa macquul ah in lagaga faragelinta by antibodies aadanaha anti-mouse (Hama) ee tijaabada. Tijaabooyinka, ka bukaan ayaa helay diyaarinta of antibodies monoclonal for cudurka ama daaweynta ku jiri kara Hama. Tijaabooyinka, noocan oo kale ah waxay keeni kartaa positive ama been natiijooyin xun oo been ah.
Natiijada baaritaanka .Tani waxaa kaliya tixraac clinical, waa in aan u adeegin saldhig kaliya ee cudurka caafimaad iyo daaweynta, bukaanka maamulka rugaha caafimaadka waa in ay tixgelin dhamaystiran weheliso calaamadaha ay, taariikhdaada caafimaad, baaritaan kale shaybaarka, jawaabta daaweynta, in saf iyo macluumaad kale oo .
Reagent .Tani waxaa loo isticmaalaa keliya imtixaanka serum iyo plasma. Waxaa laga yaabaa in aan helo natiijo sax ah marka loo isticmaalo baarka kale sida candhuufta iyo kaadida iyo iwm
Linearity 5 ng / mL 120 ng / mL weecasho qaraabo: -15% in + 15%.
Wehliyaha xiriir toosan: (r) ≥0.9900
saxnaanta heerka soo kabashada noqon doonaa gudahood 85% - 115%.
(None of walxaha ee interferent ku tijaabiyey fara gelin ku dayo ah) Interferent fiirsashada Interferent
perodoxida dabocase Horse 2000μg / mL
1.Hansen JH, et al.HAMA Fara Immunoassays Murine Monoclonal unugyada Ku-saleysan [J] .J of Clin Immunoassay, 1993,16: 294-299.
2.Levinson SS.The Nature of Heterophilic Difaaca iyo Doorka ay ku Fara Immunoassay [J] .J of Clin Immunoassay, 1992,15: 108-114.
Key in calaamadaha loo isticmaalaa:
Giisa Baarista Device Medical
Store at 2-30 ℃
Taariikhda uu dhacayo
La tasho Tilmaamaha Waayo Isticmaal
Xeebaha geeska Afrika Wiz BRICK CO, LTD.
Address: 3-4 Floor, No.16 Building, Workshop Bio-caafimaad, 2030 Wengjiao West Road, Degmada Haicang, 361026, xeebaha geeska Afrika, Shiinaha
Previous: Kit cudur-D-Dimer (fluorescence dayo immunochromatographic)
Next: Kit ogaanshaha Wadnaha Troponin I (fluorescence dayo immunochromatographic)
Kit Test Wadnaha
Kit ogaanshaha Wadnaha Troponin I (fluoresc ...
Kit cudur-Isoenzyme MB ee Creatine Kin ...
Kit cudur-D-Dimer (difaac fluorescence ...
© Copyright - 2019-2020: Dhamaan Reserved Rights.